Moist Vanilla Cake + လွယ်ကူသော Buttercream (ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ) - ကိတ်မုန့်
လွယ်ကူသော Buttercream နှင့်အတူ Moist Vanilla ကိတ်မုန့်
ဒါ vanilla ကိတ်မုန့် စာရွက်တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရသာရှိပြီးပျော့ပျောင်း။ တိမ်ကဲ့သို့သောအစအနရှိပြီးအလွန်ပင်စိုစွတ်သည်။ ကိတ်မုန့်ညက်၊ ပြောင်းပြန်လိမ်းဆေးနည်းလမ်း၊ ထောပတ်များစွာနှင့်ဆီတို့ထိခြင်းဖြင့်ဤကိတ်မုန့်ကိုရက်ပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းထားသည်။ အလင်းနှင့် creamy buttercream နှင်းခဲ ကြောင်းလုပ်လွယ်ကူသောနှင့်မချိုလွန်းသောဤသည် PERFECT vanilla ကိတ်မုန့်စေသည်။ သင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုအမှန်တကယ်အထင်ကြီးလိုပါကအလှဆင်ခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ palette ဓါး buttercream ပန်းများကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကိုတောင်ငါပြမယ်။
ငါ့နောက်မှ အဖြူကတ္တီပါထောပတ်ကိတ်မုန့်, နှင့် သံပုရာဘလူးဘယ်ရီကိတ်မုန့် , ဒီ vanilla ကိတ်မုန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါဒီစာရွက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကငါ့ရဲ့ကိတ်မုန့်ဖောက်သည်တွေအတွက်ဝေဖန်သုံးသပ်တာတွေမရှိခဲ့ဘူး။ ငါ၏အလွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူ ကိတ်မုန့်အလှဆင်စာအုပ် ငါသည်ဤကိတ်မုန့်တကယ်ဖြစ်လာသည်ဘယ်လောက်လူကြိုက်များထွက်ရှာတွေ့! ဤသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုစာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့်, ​​မွေးနေ့ကိတ်မုန့်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောနှင့်စာရွက်ဘို့သင့်ကိုမေးမြန်းလူတိုင်းထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီမှာအင်ဖို၏ ton တစ် ဦး သည်ဤဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ငါကစိတ်ပျက်စရာပုံရသည်ထင်ပေမယ့်ငါက fluff မဟုတ်ပါဘူးကျိန်ဆို! ဒါဟာရာပေါင်းများစွာသောလူတွေငါ့ကိုအကြောင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအကြောင်းကိုမေးသောအရာအားလုံးပါပဲ, ဒါကြောင့်ငါတတ်နိုင်သမျှများစွာသောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်နှင့်န်းကျင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သင်၏အောင်မြင်မှုအာမခံ။ ငါကအဲဒီမှာအဲဒီမှာအကောင်းဆုံး vanilla ကိတ်မုန့်ဖြစ်ခဲ့သည်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုသင်ကသက်သေပြပါစေဟုပြောသည်!
မုန့်ညက်ကိတ်မုန့် (ပရိုတင်းဓာတ်နည်းသောဂျုံမှုန့်) သည်ဤစာရွက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာ All- ရည်ရွယ်ချက်မုန့်ညက်ထက်နိမ့်ပရိုတိန်းအကြောင်းအရာရှိပါတယ်။ ပရိုတိန်းအနိမ့်သည် gluten ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ညီမျှပြီးနူးညံ့။ နူးညံ့သောအစေ့များကိုရရှိစေသည်။ မုန့်ညက်ကိတ်မုန့်သည်အကောင်းဆုံးသောကိတ်မုန့်အတွက် pastry ကျောင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
“ သာမန်ဂျုံမှုန့်ကိုပြောင်းဖူးမှုန့်ကိုပေါင်းထည့်ပါ” လှည့်ကွက်အတွက်မကျပါနှင့်။ ဒီစာရွက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး creaming နည်းလမ်းကိုပြောင်းပြန် ။ အကယ်၍ သင်သည်ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိသောမုန့်ညက်ကိုသုံးပါကသင်၏ကိတ်မုန့်သည်ပြောင်းဖူးကဲ့သို့အရသာရှိလိမ့်မည်။
သင်ကအခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုတွင်ရောက်နေလျှင်မုန့်ညက်မုန့်ကိုရှာနိုင်သည်။ ယူကေမှာရှာပါ Shipton ကိတ်မုန့်နှင့် pastry ဂျုံမှုန့် ။
Pro-tip - ကိတ်မုန့်သည်ပရိုတင်းပမာဏ ၉% သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောပမာဏနည်းသောကြောင့်ပရိုတင်းပါဝင်မှုကိုဖော်ပြသည့်သို့မဟုတ်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာမုန့်ညက်ရောင်းချမှုကိုမေးမြန်းသောမုန့်ညက်ကိုရှာပါ။
အကယ်၍ သင်သည် AP ဂျုံမှုန့်ကိုသာတွေ့နိုင်ပါကကျွန်ုပ်အားစမ်းသပ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည် အဖြူကိတ်မုန့်စာရွက် အစား။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် vanilla vanilla cake အတွက်အဓိကအရသာဖြစ်သောကြောင့်အရည်အသွေးသည်အရေးပါသည်။ အစဉ်မပြတ်ငါ vanilla ထုတ်ယူအသုံးပြုသည်။ ကအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြစ်သောကြောင့်ငါကော့စကနေရ။ သငျသညျ splurge ချင်လျှင်သင်တို့သည်လည်း vanilla beans သို့မဟုတ် vanilla bean ကိုငါးပိကိုသုံးနိုင်သည်။ vanilla ထုတ်ယူမှုအညိုရောင်ဖြစ်ခြင်းအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ကိတ်မုန့်ကိုဖုတ်သည်နှင့်သင်ပြောနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သငျသညျအခြို့သောလူပြုကြသောအဆင်ပြေသောအရသာကြိုက်နှစ်သက်မဟုတ်လျှင်အတု vanilla အရသာဝေးဝေးနေရန်ကြိုးစားပါ! ဒါပေမယ့်ငါအဘယ်အရာကိုထွက်အစဉ်အဆက်ကတည်းက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း vanilla ထုတ်ယူကနေလုပ်ဖြစ်ပါတယ် ငါ haha ​​ပြန်မသွားနိုင်ပါ။ အိုကေဒါကတကယ်မဟုတ်ပေမယ့်မမှန်နိုင်ပေမယ့်… ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်သဘာဝ vanilla အကြားခြားနားချက်အကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ။
အောင်မြင်မှုအတွက်သိကောင်းစရာများ (ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ သင်ဖတ်ချင်တယ်)
သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးထွက်တိုင်းတာ စကေးနှင့်အတူ။ မုန့်ဖုတ်သည်သိပ္ပံပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ကမတော်တဆအလွန်အကျွံထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်ခွက်များသုံးသောအခါမုန့်ညက်မလုံလောက်နိုင်သောကြောင့်တိကျမှန်ကန်မှုအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုလိုအပ်သည်။ မီးဖိုချောင်ပမာဏကိုမုန့်ဖုတ်တန်း၌ကုန်စုံစတိုးဆိုင်များတွင်ဒေါ်လာ ၂၀ ထက်မပိုသော ၀ ယ်နိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ထောပတ်, နို့နှင့်ကြက်ဥကိုအခန်းအပူချိန်သို့ယူလာပါ ။ အခန်းအပူချိန်ပါဝင်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျ emulsion ဖန်တီးလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများမဆိုအအေးလျှင်ထို့နောက် Battery ကိုစနစ်တကျအတူတကွရောနှောမည်မဟုတ်နှင့်သင်ကိတ်မုန့်ရဲ့အောက်ခြေမှာစိုစွတ်သောအလွှာနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏ကြက်ဥ၊ နို့နှင့်ထောပတ်တို့ကိုမည်သို့ကောင်းမွန်စွာနွေးရမည်ကိုသင်သိလိုပါကအထက်ပါ link ကိုနှိပ်ပါ။
ရောနှောဖို့မကြောက်ပါနဲ့ ။ သင်နှစ်မိနစ်ခန့်ရောနှောသွားသောကြောင့်သင်ရောစပ်ဇာတ်စင်အကြောင်းကိုထွက် freaked ရစေခြင်းငှါရှေ့တော်၌ထိုပြောင်းပြန် creaming နည်းလမ်းကိုတစ်ခါမှမသုံးဖူးလျှင်။ သင်သည်ကိတ်မုန့်ကိုအစဉ်အလာအတိုင်းပြုလုပ်သောအခါသင်၏ကိတ်မုန့်ကိုအလွန်အကျွံရောစပ်။ ကြီးမားသောအပေါက်များ (ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း) များကိုဖန်တီးနိုင်သောကြောင့်သင်မည်မျှကြာကြာမရောထွေးပါ။
နှင့်အတူ creaming metho reverse we ကျွန်တော်တို့ဟာထောပတ်ထဲမှာအရင်ကဂျုံမှုန့်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းမှဟန့်တားပေးသောဂျုံမှုန့်ကိုအရင်ချသည်။ ငါတို့သည်လည်းပုံမှန်မုန့်ညက်ကဲ့သို့ခိုင်မာသောမဟုတ်သောကိတ်မုန့်ညက်ကိုအသုံးပြုသည်ဒါကြောင့်ပိုပြီးရောနှောရန်လိုအပ်ပါသည်။ Reverse creaming သည်ပုံမှန်ရောနှောခြင်းပုံစံထက်အရည်များနှင့်သကြားများများထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့် vanilla cake သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်စိုစွတ်။ နူးညံ့သည်။
သင့်အမြင့်ကိုစစ်ဆေးပါ အကယ်၍ သင်သည်ပေ ၅၀၀၀ အထက်တွင်နေထိုင်ပါက vanilla ကိတ်မုန့်များမပြိုကွဲစေရန်သင်၏မုန့်ဖုတ်မှုန့်အနည်းငယ်ကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
Vanilla ကိတ်မုန့်အဆင့် -by- အဆင့်
အဆင့် 1 - သင့်မီးဖိုကို ၃၃၅ toF အထိအပူပေးပါ။ ငါကပြားချပ်ချပ်ကိတ်မုန့်မှုကြောင့်အနိမ့်သောအပူချိန်မှာဖုတ်ချင်ပေမယ့်သင့်ရဲ့မီးဖိုကြောင့်စွမ်းရည်မရှိပါလျှင်, 350ºFမှာမုန့်ဖုတ်ဖို့နေဆဲ ok ပါပဲ။ မုန့်ဖုတ်ပြီးတဲ့နောက်သင့်မှာသေးငယ်တဲ့အမိုးခုံးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။
အဆင့် ၂ - နို့၏ပထမဆုံးတိုင်းတာမှု (၄ အောင်စ) ကိုသီးခြားတိုင်းတာသည့်ခွက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ ဆီထည့်ပြီးဘေးဖယ်ထားပါ။
အဆင့် ၃ - နို့၏ဒုတိယတိုင်းတာရန်, ကြက်ဥနှင့် vanilla ထုတ်ယူထည့်ပါ။ ကြက်ဥကိုချိုးဖျက်ဖို့ပေါ့ပေါ့တန်တန် Whisk ။
အဆင့် ၄ - သင်၏မုန့်ညက်၊ သကြား၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ၊ မုန့်ဖုတ်နှင့်ဆားတို့ကိုသင်၏ရပ်တည်သည့်အရောအနှောရောနှောထားသောအိုး၌တွဲထားပါ။ သင်တို့သည်လည်းလက်ရောနှောသုံးနိုင်သည်။
* သင်မမေးမီဤသူသည်ငါဖြစ်သည် Bosch universal ပေါင်းဖက်ချိတ်ဆက်မှု link သင်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်စိတ်ဝင်စားလျှင်။
အဆင့် ၅ - အနိမ့်အပေါ်ရောနှောနေစဉ်သင့်ရဲ့ပျော့ပျောင်းထောပတ်အတွက်ထည့်ပါ။ ကြမ်းတမ်းသောသဲနှင့်တူသည်အထိအရာအားလုံးကိုရောမွှေပါ။
အဆင့်6- ယခုနို့ / ရေနံအရောအနှောထဲထည့်ပြီးအမြန်နှုန်း4(Bosch ပေါ်ရှိ KitchenAid တစ်ခုသို့မဟုတ်မြန်နှုန်း ၂ တွင်) ကိုမြှင့ ်၍ ကိတ်မုန့်၏တည်ဆောက်ပုံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်မိနစ် ၂ မိနစ်အချိန်ယူပါ။ Battery သည်အဖြူ၊ အဖြူဖြစ်မည်၊
အဆင့် ၇ - ယခုငါတို့အနိမ့်အပေါ်ရောနှောနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြက်ဥ / နို့အရောအနှောထည့်သွင်းသွားကြသည်။ ငါတို့ကြက်ဥနှင့်အရည်များနှင့်အတူ emulsion ဖန်တီးသောကြောင့်ငါတို့ကိတ်မုန့်စိုစွတ်လာတယ်။ သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထည့်ပါကသင်၏အရည်သည်ထောပတ်မှခွဲထုတ်ပြီးကိတ်မုန့်၏အောက်ခြေသို့ကျသွားလိမ့်မည်။
အဆင့် ၈ - Battery ကိုသုံးပြီး 8 x x2″ အိုးများသုံးခုခွဲပါ ကိတ်မုန့် သို့မဟုတ်သင်ပိုမိုနှစ်သက်သောဒယ်အိုးဖြန့်ချိမှု။ ထပ်ဆောင်းအာမခံချက်အတွက်သင်ကစာရေစက္ကူကိုဒယ်အိုး၏အောက်ခြေသို့ထည့်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။ ၃/၄ နှင့်ပြည့်သောအိုးများကိုဖြည့်ပါ။ ငါအရမ်းရယ်ရတယ်တူသောပြီးပြည့်စုံဝါဒီငါနေသောကြောင့်, ငါ့အိုးအားလုံး Battery ကို၏တူညီသောငွေပမာဏရှိသေချာစေရန်စကေးကိုအသုံးပြုပါ။
အဆင့်9- သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်များကို ၂၅-၃၀ မိနစ်ခန့်အလယ်ဗဟို ထား၍ သွားကြားထိုးတံမသန့်ရှင်းမှီတိုင်အောင်ဖုတ်ရမည်။ သငျသညျအချိန်ပိုမိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ကြာကြာအဘို့အကိတ်မုန့်ဖုတ်ရန်မကြောက်ပါနဲ့။
အဆင့် 10 - မီးဖိုထဲကကိတ်မုန့်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအအေးခံစင်ထဲကိုချလိုက်ပါ။ အိုးများအနိုင်နိုင်သည်အထိသူတို့ကိုအအေးကြပါစို့။ သူတို့ကိုအအေးမခံပါနှင့်သို့မဟုတ်သူတို့ကပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် 11 - ကိတ်မုန့်များအေးပြီးသည့်နောက်၎င်းတို့ကိုအအေးခံရန်အအေးခံမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့လှန်လိုက်ပါ။ ထိုအခါငါသူတို့ကိုပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီးထုပ်, ကိတ်မုန့်ကိုမြဲမြံစေခြင်းငှါမိနစ် 30 အဘို့ရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာသူတို့ကိုထားဒါကြောင့်ငါမနှင်းခဲမီကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။ သငျသညျချက်ချင်းသူတို့ကိုနှင်းခဲအပေါ်စီစဉ်ကြဘူးလျှင်သင်တို့သည်လည်းသင်၏ကိတ်မုန့်အေးခဲနိုင်ပါတယ်။
လွယ်ကူသော Buttercream လုပ်နည်း
ကိတ်မုန့်တွေကအေးနေတုန်းမှာအခုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ လွယ်ကူသော buttercream ။ လွယ်လွယ်ကူကူ buttercream လုပ်ရတာကိုသဘောကျတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကမြန်မြန်ဆန်ဆန်အတူတူလာပြီးအရသာတူလို့ပါ ဆွစ်ဇာလန် meringue buttercream ဒါပေမယ့်ပိုမြန်။
အဆင့် 1 - သင်၏ Pasteurized ကြက်ဥအဖြူနှင့်အမှုန့်သကြားတို့ကို whisk ပူးတွဲပါရှိသည်။ သကြားပျော်စေရန်တစ်မိနစ်အဘို့အမြင့်ဆုံးအပေါ်ရိုက်ပါ။
အဆင့် ၂ - နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်များကိုအပိုင်းအစငယ်ငယ်များဖြင့်ပေါင်းထည့်ပါကအနိမ့်အမြင့်တွင်ရောနှောနေစဉ်၎င်းကိုပေါင်းထည့်ပါ။
ရွှေယို icing လုပ်နည်း
အဆင့်3- သင်၏ vanilla နှင့်ဆားထည့်ပါ။ ရောနှောသောအမြန်နှုန်းကိုမြင့်မားအောင်တိုးမြှင့်ပြီး buttercream သည်ပေါ့ပါးပြီးခရင်မ်မထွက်မချင်းမြင့်မားသောနေရာတွင်ရိုက်သည်။ အရသာတစ်ခုပေးပါ။ ထောပတ်လိုအရသာရှိနေတုန်းပဲ။ ၎င်းသည်ချိုသောရေခဲမုန့်ကဲ့သို့အရသာရှိသင့်သည်။
သင့်ရဲ့ buttercream ပန်းကန်လုံး၏နှစ်ဖက်မှတွယ်ကပ်နေတယ်ဆိုရင် တက်မထိဘူး၊ မင်းရဲ့ထောပတ်ကအရမ်းအေးနိုင်တယ်။ buttercream ခွက်တစ်ခွက်ကိုထုတ်ယူပြီးအရည်ပျော်ကျသည်အထိမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်တွင်အရည်ပျော်ပါ။
အအေးခံ buttercream ထဲကိုအရည်ပျော်တဲ့ buttercream ထဲကိုထည့်ပြီးပေါ့ပြီး fluffy အထိဆက်ပြီးရိုက်ပါ။ ဒီဟာက ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အထိကြာနိုင်ပါတယ်
optional ကို: လှော်ကိုပြောင်းပြီးအပိုပူဖောင်းများကိုဖယ်ရှားရန်သင့် buttercream ကို ၁၀ မိနစ်ခန့်ရောနှောပါစေ။ သင်သည်အလွန်ချောမွေ့ပြီးချောမွေ့သော buttercream ရှိလိမ့်မည်။ သင်၏အဖြူရောင်အရောင်ဖြူသို့မဟုတ်ခရမ်းရောင်အစားအစာအရောင်အနည်းငယ်ကိုဖြန့်ချိ။ သင်၏ buttercream ကိုတောက်ပစေရန်အတွက်လည်းဖြည့်နိုင်သည်။
ငါ့ vanilla ကိတ်မုန့်ကို palette ဓါးသုံးပြီးလှပသော buttercream ပန်းများဖြင့်အလှဆင်ပါမည်။ သင့်မှာ palette ဓါးမရှိရင်သင်ကြိုက်တဲ့နည်းအတိုင်းကိတ်မုန့်ကိုအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ ငါ့စောင့်ကြည့်ပါ သင့်ရဲ့ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ကိုဘယ်လိုအလှဆင်မလဲ အကြံဥာဏ်များပိုမိုရရှိရန်ဗီဒီယိုနှင့်ငါကိတ်မုန့်အလှဆင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောစံသုံးကိရိယာများကိုငါကျော်သွားသည်။
အဆင့် 1 - သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုအချပ်များချုံ့ပါ။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်ပြီးအဆင့်မြင့်နိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ငါချွန်တဲ့ပေါင်မုန့်ကိုသုံးတယ်။
optional ကို : အညိုရောင်အနားတွေကိုချုံ့ပါ။ ဒါဆိုမင်းကိတ်မုန့်တွေကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ကိတ်မုန့်ကလွဲရင်ဘာမှမရှိဘူး ဒီဟာကအရေးကြီးတဲ့အသွင်အပြင်ရှိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့်အတွက်ကျွန်တော်လုပ်လေ့ရှိတယ်။
အဆင့် ၂ - သင်၏ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ကို ၆″ ကိတ်မုန့်ပေါ်သို့တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သင်၏ကိတ်မုန့်ပြားပေါ်သို့တင်ပါ။
အဆင့်3- ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင် buttercream အလွှာကိုဖြန့်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် 1/4″ အထူရှိသည်။ သင့်ရဲ့ offset spatula နှင့်အတူက level ကိုအောင်ကြိုးစားပါ။
အဆင့်4- သင်၏နောက်အလွှာကိုထပ်ထည့်ပြီး buttercream ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ အပေါ်ယံလွှာနှင့်ပြီးအောင်လုပ်ပါ။
အဆင့်5- ကိတ်မုန့်တစ်လျှောက်တွင်ထောင့်ပါးလွှာလေးတစ်ခုဖြန့်ပါ။ ဒါကို crumb coat လို့ခေါ်တယ်။ ပြီးတော့ဒါကို crumbs မှာထားတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးကိတ်မုန့်ထဲရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းရဲ့ကိတ်မုန့်ကိုရေခဲသေတ္တာထဲမှာဒါမှမဟုတ်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၁၅ မိနစ်ထည့်ပြီး buttercream ထိတွေ့ပါ။
အဆင့်6- သင်၏ဒုတိယ buttercream အလွှာကိုထည့်ပါ။ ငါထိပ်ကနေစပြီးလှဲချလိုက်တယ်။ ထိုအခါငါနှစ်ဖက်စလုံးမှာ buttercream ထည့်ပြီးငါ့အခုံတန်းလျားခြစ်နှင့်အတူကအားလုံးကိုထွက်ချောမွေ့။ ကိတ်မုန့်နှင်းခဲနေခြင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်များအတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုရေခဲသေတ္တာထဲပြန်ထည့်ပြီး buttercream သည်အထိ ၁၅ မိနစ်ခန့်ထားပါ။ ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်နေ့အလှဆင်ချင်ရင်ကိတ်မုန့်ကိုညအိပ်မှာချန်ထားနိုင်ပါတယ်။
အဆင့် ၇ - သင်၏ buttercream ကိုအရောင်ခြယ်ပါ။ Americolor လျှပ်စစ်ပန်းရောင်အစားအစာအရောင်ကို အသုံးပြု၍ အရောင်၊ အလင်းနှင့်ပန်းရောင်တစ်ခုစီ၏ ၁/၄ ခွက်ကိုကျွန်ုပ်အရောင်တင်ခဲ့သည်။
အဆင့် ၈ - သင်၏ buttercream ပန်းများကိုပြုလုပ်ရန်သင်၏ palette ဓါးဖြင့်သုံးပါ (ဗီဒီယိုကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရန်) ။ ငါသည်လည်းကဒီမှာအဖြူဖြန်းအနည်းငယ်ဖြည့်စွက်။
ပန်းရောင်ဓား၏အောက်ခြေကိုပန်းရောင် buttercream အချို့နှင့်ထည့်ပါ
ပိုလျှံဖယ်ရှားပစ်ရန်ပန်းကန်ဆန့်ကျင် palette ဓါး၏နှစ်ဖက်ခြစ်
ကိတ်မုန့်၏မျက်နှာပြင်ပေါ် palette ဓါးကိုနှိပ်ပါ
ဒီဖြစ်စဉ်ကိုပြန်လုပ်ပါသို့မဟုတ် 5- သို့မဟုတ် Petal ပန်းပွင့်ပါစေ
ပိုမိုပေါ့ပါးသောပန်းရောင် buttercream နှင့်အတူအပေါ်ယံတွင်ပွင့်ချပ်များပိုမိုခင်းပါ
ပန်း၏အလယ်ဗဟိုသို့အချို့သောအဖြူရောင် buttercream ထည့်ပါ
ထိုအသင်၌ရှိသည်! က စိုထိုင်းသောနှင့်အရသာ vanilla ကိတ်မုန့် လှတယ် ကျွန်ုပ်သည်ကိတ်မုန့်များကိုအစေခံရန်အဆင်သင့်မဖြစ်မှီတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်အားရေခဲသေတ္တာထဲ၌အမြဲထားလေ့ရှိသည်။ သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုအစာမစားမီနာရီအနည်းငယ်အကြာရေခဲသေတ္တာထဲမှထုတ်ယူပါ။ လွယ်ကူသော buttercream သည် ၂၄ နာရီလုံးလုံးအခန်းအပူချိန်တွင်ရှိနိုင်သည်။
ဒီစာရွက်ဟာflatုံပြားချပ်ချပ်ဖုတ်ဖို့ပုံဖော်ထားတာဖြစ်လို့မောက်ကိတ်တွေအတွက်ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူး။ မင်းကသူတို့ကိုမက္ကိတ်မုန့်အတွက်တကယ်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်၊ ငါ့ကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး vanilla မယားစကားစာရွက် အစား။
၄ မိနစ်လျှင် ၄၀၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တွင် ၅ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ပါ။ ထို့နောက်အပူချိန် ၃၃၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိရှိရန် ၁၀ မိနစ်သို့မဟုတ်သွားတိုက်လိမ်းဆေးမထွက်မှီအထိဖြစ်သည်။ အစအ ဦး ၌အပိုအပူသည်မောက်စ်အမိုးခုံးတက်ခြင်းနှင့်မယားစကားထုပ်ခြင်းနှင့်နီးကပ်စွာဆက်သွယ်မှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ဒီစာရွက်ကိတ်မုန့် ၃၆ လုံးပါ။
ဒီ Vanilla ကိတ်မုန့်ကို Fondant တွင်သင်ဖုံးအုပ်နိုင်ပါသလား။
အဖြေမှာဟုတ်ကဲ့! သင်ဤကိတ်မုန့်ကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်သည် မြတ်နိုး နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်မုန့်ဒိန်ခဲနှင်းခဲနှင့်အတူကနှင်းခဲပါဘူးအဖြစ်။ Cream ဒိန်ခဲအေးခဲခြင်းသည် fondant ဘေးတွင်မကောင်းသည်၊ ၎င်းသည်ငို။ မြည်တမ်းစေသည်။ သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်အေးခဲပြီးတဲ့နောက်သင်တတ်နိုင်သမျှ buttercream ၏နောက်ဆုံးအလွှာနှင့်အတူအေး fondant ထဲမှာဖုံးလွှမ်းထားသည်။
Berry ဟာ Chantilly ကိတ်မုန့်
ပြောင်းပြန် creaming နည်းလမ်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံး vanilla ကိတ်မုန့်ကိုဘယ်လိုလုပ်နည်း။ စိုထိုင်းသော၊ နူးညံ့သောအရောင်နှင့်မမေ့နိုင်သောအရသာ။ ပြင်ဆင်ချိန် -ဆယ့်ငါး မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၃၀ မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:လေး မိနစ် ကယ်လိုရီ445kcal
▢၄ အောင်စ (၁၁၃ ဆ) နို့လုံး ဆီနှင့်ရောနှောခံရဖို့
▢၃ အောင်စ (၈၅ ဆ) canola ရေနံ
▢၆ အောင်စ (၁၇၀ ဆ) နို့လုံး ကြက်ဥနှင့်ရောနှောခံရဖို့
▢၁ ဇွန်း (၁ ဇွန်း) vanilla ထုတ်ယူ သို့မဟုတ် 1 vanilla bean ခွံ
▢၃ ကြီးမားသည် (၃ ကြီးမားသည်) ဥ အခန်းအပူချိန်
▢၁၃ အောင်စ (368 ဆ) မုန့်ညက်မုန့်ညက်
▢၁၃ အောင်စ (368 ဆ) သကြားဓာတ်
▢၃ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၁၄ ဆ) မုန့်ဖုတ်ပေါင်ဒါ
▢1/4 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (1/4 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း) မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ
▢1/2 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (1/2 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း) ဆားငန်
▢၈ အောင်စ (၂၂၇ ဆ) unsalted ထောပတ် အခန်းအပူချိန်မှပျော့ပျောင်းပေမယ့်အရည်ပျော်မဟုတ်
▢၁၆ အောင်စ (454 ဆ) unsalted ထောပတ် အခန်းအပူချိန်မှပျော့ပျောင်းပေမယ့်အရည်ပျော်မဟုတ်
▢1/4 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (1/4 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း) ဆားငန်
▢၁ အလွန်သေးငယ်သော drop (၁ တစ်စက်) ခရမ်းရောင်အစားအစာအရောင် အဝါရောင်အရောင်ကိုချိန်ညှိရန် (optional)
▢၃ ပေါက် လျှပ်စစ်ပန်းရောင်အစားအစာအရောင် ပန်းပွင့်အဘို့
▢၁ ဇွန်း ဖြူဖြန်း အလှဆင်ဘို့
▢၈ 'x ၂' ကိတ်မုန့် (၃)
အရေးကြီးတယ် ဖြေ - ဒါကအကောင်းဆုံး vanilla ကိတ်မုန့်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါချိန်ခွင်ကိုသုံးပြီးဒါကအပြည့်အဝထွက်လာတယ်။ မင်းကခွက်တွေဆီကိုကူးပြောင်းမယ်ဆိုရင်ရလဒ်ကောင်းကိုငါအာမခံလို့မရဘူး။ သင်၏ (အအေးပါဝင်သော) ထောပတ်၊ ဥ၊ နို့အားလုံးသည်အခန်းအပူချိန်သို့မဟုတ်နွေးထွေးမှုရှိမရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ။ အလေးချိန်အားဖြင့်မည်သို့တိုင်းတာမည်ကိုမသိလျှင်စကေးမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုကျွန်ုပ်၏ပို့စ်တွင်ကြည့်ပါ။
335º F / 168ºCသို့မီးဖိုကိုအပူပေးပါ။ 8'x2 'ိတ်မုန့်ဖုတ်သုံးလုံးကိုကိတ်မုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။
နို့4အောင်စကိုသီးခြားတိုင်းတာသည့်ဖလားတွင်ထားပါ။ နို့ဆီကိုထည့်ပြီးဘေးဖယ်ထားပါ။
ကျန်ရှိနေသောနို့6အောင်စကို vanilla နှင့်အခန်းအပူချိန်ကြက်ဥထည့်ပါ။ ပေါင်းစပ်ဖို့ညင်ညင်သာသာ whisk ။ ဘေးဖယ်ထားပါ။
မုန့်ညက်, သကြား, မုန့်ဖုတ်မှုန့်, ​​မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့်ဆားကိုလှော်ပူးတွဲပါနှင့်သင်၏ရပ်တည်ချက်ရောနှော၏ပန်းကန်ထဲသို့ချထားပါ။
အရောအနှောအားအနှေးဆုံးအမြန်သို့လှည့်ပါ။ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်အတုံးများကိုဖြည့်စွက်ပြီးသည်အထိဖြည်းဖြည်းထည့်ပါ။ ပြီးလျှင်သဲနှင့်တူသည်အထိအားလုံးရောနှောပါစေ။
သင်၏နို့ / ရေနံအရောအနှောကိုခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများထဲသို့တစ်ပြိုင်နက်ထည့်ပြီးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက်မိနစ် (၂) လုံးအဘို့အလတ်စား (Kitchenaid တွင်အမြန်နှုန်း ၄၊ Bosch တွင်မြန်နှုန်း ၂) ကိုရောနှောပါ။ timer နေရာသတ်မှတ်ပါ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒါကကိတ်မုန့်ကိုအလွန်အမင်းမွှေနှောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
2 မိနစ်ခန့်ပြီးနောက်, ပန်းကန်ခြစ်။ ဤသည်မှာအရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုကျော်သွားပါကသင်သည်သင်၏ Battery ထဲ၌ခဲယဉ်းသောမုန့်ညက်နှင့်ရောနှောထားသောပါဝင်ပစ္စည်းများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်နောက်မှလုပ်လျှင်သူတို့သည်အပြည့်အဝရောနှောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အနိမ့်များတွင်ရောစပ်နေစဉ်နို့ / ကြက်ဥအရောအနှောထဲသို့ဖြည်းဖြည်းထည့်ပါ၊ ပန်းကန်လုံးကိုတစ်ဝက်ကျော်ခြစ်ရန်ရပ်လိုက်သည်။ ရုံပေါင်းစပ်သည်အထိရောမွှေပါ။ သင့်ရဲ့ Battery ကအရမ်းထူပြီးမထူသင့်ဘူး။
Battery ကိုသင်၏ greased cake အိုးများထဲသို့ ခွဲ၍ လမ်း ၃/၄ အပြည့်ဖြည့်ပါ။ ငါသူတို့ပင်သေချာစေရန်ငါ့အိုးကိုချိန်ခွင်။
မိနစ် ၃၀ ကြာဖုတ်ပြီးသင်၏ကိတ်မုန့်များကိုစစ်ဆေးပါ။ 'ပြီးပြီစမ်းသပ်မှု' လုပ်ပါ။ သန့်ရှင်းမှုရှိမရှိကြည့်ရှုရန်သွားတိုက်ကိုထည့်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံစိုစွတ်သော Battery သည်မပေါ်လာပါက၎င်းသည်သန့်ရှင်းပြီးစိုစွတ်မှုကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ ထို့နောက်ကိတ်မုန့်ထိပ်ကိုညင်ညင်သာသာထိလိုက်လျှင်ပြန်ပေါ်လာသလား။ မီးဖိုရဲ့အပူချိန်ကမတူနိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်မပြီးသေးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်မိနစ်အနည်းငယ် (၂-၃) လောက်ဖုတ်ပါ။ ပြီးပြီဆိုရင်စစ်ဆေးပြီးသွားပြီ။
၁၀ မိနစ်ခန့်အအေးခံပြီးနောက်အေးခဲသောထိန်သိမ်းကိုကိတ်မုန့်ပေါ်တွင် တင်၍ အအေးခံစင်တစ်ခုနှင့်လက်တစ်ဖက်ကိုဒယ်အိုးအောက်တွင် ထား၍ ဒယ်အိုးနှင့်အအေးခံကိုလှန်လိုက်ပါ။ အအေးထိန်သိမ်း။ ဂရုတစိုက်ဒယ်အိုးဖယ်ရှားပါ။ အခြားဒယ်အိုးနှင့်အတူထပ်လုပ်ပါ။
ကိတ်မုန့်များကိုအပြည့်အဝအေးဆေးပြီးနောက်ပလပ်စတစ်ဖြင့်ထုပ်ပြီးဂရုတစိုက်ထုပ်ပြီးရေခဲသေတ္တာထဲသို့မိနစ် ၃၀ ခန့်ထားပြီးလျှင်ကိတ်မုန့်များကိုမြဲမြံခိုင်မြဲစေရန်နှင့်သိုလှောင်ရန်အတွက်လွယ်ကူစွာထားပါ။
ကြက်ဥအဖြူနှင့်အမှုန့်သကြားတို့ကိုမတ်တပ်ရပ်သည့်ဖလားတွင်ထည့်ပါ။ , အ whisk ပူးတွဲပါနိမ့်အပေါ်ပါဝင်ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ပြီးတော့5မိနစ်အမြင့်ဆုံးအပေါ်ရိုက်။ အဆိုပါ vanilla ထုတ်ယူနှင့်ဆားထည့်ပါ။
သင်၏နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်ကိုအပိုများထဲသို့ထည့်ပြီးပေါင်းထည့်ရန် whisk attachment နှင့်ရိုက်ပါ။ ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးအခွံကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကပုံမှန်ပါပဲ ဒါဟာအစတော်တော်လေးအဝါရောင်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။ ကြာပွတ်ကိုဆက်လုပ်ပါ
အလွန်ဖြူ၊ အလင်းနှင့်တောက်ပသည်အထိ ၈-၁၀ မိနစ်အထိကြာမြင့်စွာရိုက်ပါ။ သငျသညျအလုံအလောက်ရိုက်ကြဘူးလျှင်, က buttery မြည်းစမ်းအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
ရွေးချယ်စရာ - အကယ်၍ သင်သည်အဖြူရောင်နှင်းခဲကိုလိုချင်လျှင်ထောပတ်အတွင်းရှိအဝါရောင်ကိုတန်ပြန်ရန်ခရမ်းရောင်သေးသေးလေးတစ်စက်ထည့်ပါ။
Optional - လှော်ပူးတွဲပါ ၀ င်ပြီး buttercream အလွန်ချောမွေ့စေရန်နှင့်လေပူဖောင်းများကိုဖယ်ရှားရန် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အထိရောနှောပါ။ ဤအရာသည်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်ကအရမ်းကိုနူးညံ့သောနှင်းခဲကိုလိုချင်လျှင်၎င်းကိုမကျော်ချင်ပါ။
သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုအေးခဲစေပြီးလျှင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောနှင်းခဲများနှင့်အပြင်ပန်းကိုဖြည့်ပါ။ သင်သည်ကိတ်မုန့်များကိုအလှဆင်ခြင်းနှင့်မရင်းနှီးပါကသင်၏ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ဘလော့ဂ်ကိုမည်သို့ရေးသားရမည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ငါ palette ဓား buttercream ပန်းပွင့်ကိုဖန်ဆင်းပုံကိုကြည့်ရှုရန်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။
ကိတ်မုန့်ပျက်ကွက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်သင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုချိန်ပါ။ မုန့်ဖုတ်အတွက်မီးဖိုချောင်စကေးအသုံးပြုခြင်း အရမ်းလွယ်ကူပြီးအချိန်တိုင်းအကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုပေးသည်။
သင်၏အအေးဓာတ်ပါဝင်မှုအားလုံးသည်အခန်းအပူချိန်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်ပူနွေးအောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ (ထောပတ်၊ နို့၊ ကြက်ဥ၊ ပေါင်းစပ်။ ရသောဘက်ထရီကိုဖန်တီးရန်။ ထောင့်ချိုးများကိတ်မုန့်များပြိုကျစေသည်။ )
သင်သည်ဤစာရွက်အတွက်ကိတ်မုန့်ညက်ကိုသုံးရမည်။ 'ပြောင်းဖူးမှုန့်ကိုပုံမှန်ဂျုံမှုန့်ထဲထည့်ပါ' လှည့်ကွက်အတွက်မကျပါနှင့်။ ဒီစာရွက်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး သင်၏ကိတ်မုန့်သည်ပြောင်းဖူးကဲ့သို့အရသာရှိလိမ့်မည်။ သင်ကိတ်မုန့်ဂျုံမှုန့်ကိုရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်မုန့်ညက်နဲ့မတူပေမယ့်လူသုံးကုန်မုန့်တွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ pastry flour ကိုသုံးပါ။
သင်ကယူကေတွင်ရှာလျှင် Shipton ကိတ်မုန့်နှင့် pastry ဂျုံမှုန့် ။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်ရှိနေလျှင်ပရိုတင်းဓာတ်နည်းသောမုန့်ညက်ကိုရှာဖွေပါ။
ပြောင်းပြန် creaming နည်းလမ်းကိုသင်လုပ်သောအခါသင်သည်ဂျုံမှုန့်ကိုထောပတ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ပြီး gluten ကိုမဖွံ့ဖြိုးစေရန်တားဆီးထားသည်။ ၎င်းသည်စိုထိုင်းသောနူးညံ့သောကိတ်မုန့်ကိုဖန်တီးပေးသည်။ သင်နို့နှင့်ဆီထည့်သောအခါ၊ gluten ဖွံ့ဖြိုးရန် ၂ မိနစ်ခန့်ရောနှောပါ။ ဒါကကိတ်မုန့်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။ ၂ မိနစ်လုံးလုံးမရောထွေးပါကသင်၏ကိတ်မုန့်ပြိုကျနိုင်သည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒယ်အိုးကိုထုတ်လုပ်ပါ။ ကိတ်မုန့် !) အစဉ်အမြဲအကောင်းဆုံးဒယ်အိုးဖြန့်ချိ!
သင်၏ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ကိုပြုလုပ်ရာတွင်ပိုမိုအကူအညီလိုပါသလား။ ငါ့အထဲကစစ်ဆေးပါ သင့်ရဲ့ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ကိုဘယ်လိုအလှဆင်မလဲ blog post
အဆိုပါ Battery ကိုအတွက်အစစ်အမှန်စတော်ဘယ်ရီနှင့်အတူစတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်